DHEGEYSO: ”Waa in laga qaadaa tillaabooyin adag!” – Sweden oo doonaysa inay indhaha u shidato kooxaha gaangiska | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: ”Waa in laga qaadaa tillaabooyin adag!” – Sweden oo doonaysa inay...
DHEGEYSO: ”Waa in laga qaadaa tillaabooyin adag!” – Sweden oo doonaysa inay indhaha u shidato kooxaha gaangiska
(Stockholm) 22 Juun 2020 – Aqlabiyadda Baarlamanka Sweden ayaa iminka rumaysan in barnaamijka lagu magacaabo 34-ta qodob ee looga gol lahaa la dagaallanka dembiyada kooxaha dembiyada isku baheysta aanu ahayn mid ku filan ujeedkii loo sameeyey.
”Waa caddahay in qorshan dowladdu aanu qaniinaynin kooxahan, sida uu sheegay Johan Forsell, af hayeenka shuruucda ee Moderaterna.
34-ka qodob ayaa lasoo bandhigay lana socodsiiyey Dayrtii 2019-kii.
Previous articleQM oo DACWAD kusoo oogi karta rag uu ugu horreeyo Cali Maxamed Geeddi
Next articleDib u dhiska jidka wayn ee isku xira Muqdisho-Afgooye oo dib loo bilaabay + Sawirro